Ingqwalaselo yeSivumelwano saseVersailles
Isayinwe ngoJuni 28, 1919 njengokuphela kweMfazwe Yehlabathi yokuqala , iSivumelwano saseVersailles sifanele siqinisekise uxolo oluhlala ngonaphakade ngokugweba iJamani kunye nokusekwa kweLungu leZizwe ukuxazulula iingxaki zezopolitiko. Kunoko, yashiya ifa leengxaki zezopolitiko kunye neendawo ezihlala zithathwa, ngamanye amaxesha kuphela, ukuqala iMfazwe Yehlabathi yesiBini.
Imfazwe yokuqala Yehlabathi iye yalwa iminyaka emine xa, ngoNovemba 11, 1918, i-Jamani kunye neAllies zisayina i-armistice.
Ngokukhawuleza ama-Allies ahlanganisana ukuxubusha isivumelwano soxolo esasayinayo, kodwa iJamani no-Austria-Hungary babengamenywanga; Kunoko bavunyelwe kuphela ukunikela impendulo kumnqophiso, impendulo eyayinganyanzelwanga. Endaweni yoko, imigaqo yaqulunqwa ngokukodwa yi-'Iqhosha Elikhulu ': uNkulumbuso waseBrithani uLloyd George, uNdunankulu waseFransi uFrances Clemenceau kunye noMongameli we-US uTolrow Wilson.
Nganye ineminqweno eyahlukileyo:
UWoldrow Wilson: Wafuna 'uxolo oluhle kwaye luhlala njalo' kwaye wayebhalile isicwangciso - Amaphuzu alinesine - ukufezekisa oku. Wayefuna ukuba imikhosi yempi yeentlanga zonke iyancitshiswa, kungekhona nje abalahlekileyo, kunye neNhlangano yeziZwe ezenziwe ukuqinisekisa uxolo.
UFrances Clemenceau: Wafuna iJamani ukuba ihlawule kakhulu imfazwe, kuquka ukuhluthwa komhlaba, imboni kunye nemikhosi yazo. Kwakhona wayefuna ukubuyiswa okunzima.
ULloyd George: Nangona wavuma ngokuvisisana noWilson, waphathwa ngoluvo lukawonkewonke eBrithani oluvumelana noClemenceau.
Umphumo waba ngumnqophiso ozama ukuphazamisa, kwaye ezininzi zeenkcukacha zagqitywa kwiinkomfa ezincinci ezilungelelanisiweyo ukuba ziphume, zicinga ukuba ziyilo lokuqala, kunokuba zibhalwe ngokugqibela. Kwakungumsebenzi ongenakwenzeka, kunye nesidingo sokuhlawula iimboleko kunye namatyala ngeJamani kunye nempahla, kodwa kwakhona ukubuyisela uqoqosho lwe-pan-European; imfuno yokudinga iimfuno zomhlaba, ezininzi zazo ezibandakanyiweyo kwizivumelwano ezifihlakeleyo, kodwa kwakhona zivumela ukuzimisela kunye nokujongana nokukhula kobuzwe; isidingo sokususa isongelo saseJamani, kodwa singayithobeli isizwe kwaye sizalise isizukulwana ngenjongo yokuziphindezela, ngelixa bavotela abavoti.
Imigaqo ekhethiweyo yeSivumelwano saseVersailles
I-Alsace-Lorraine, eyathathwa yiJamani ngo-1870 kwaye imfazwe yayijolise ekuhlaseleni amabutho aseFransi ngo-1914, yabuyiselwa eFransi.
I-Saar, indawo ebalulekileyo yamalahle aseJamani, yayiza kuFransi iminyaka eyi-15, emva koko i-plebiscite yayiza kugqiba ubunini.
IPoland yaba lizwe elizimeleyo elinendlela 'eya elwandle', umzila wehlabathi owenzela iJamani ezimbini.
IDanzig, ichweba elikhulu eMpuma yePrussia (eJamani) yayiza kuba phantsi kolawulo lwamazwe ngamazwe.
Zonke iilwimi zaseJamani kunye neTurkey zathathwa kwaye zafakwa phantsi kolawulo lwama-Allied.
IFinland, iLithuania, iLatvia neCzechoslovakia zenziwe zizimele.
I-Austria-Hungary yahlukana kwaye iYugoslavia yenziwa.
Ibhankini lasekhohlo le-Rhin laliza kuba lilawulwa yimikhosi ehlangeneyo kunye nebhanki elifanelekileyo lonyanzelisiwe.
Umkhosi waseJamani unqunywe ukuba ube ngamadoda ayi-100 000.
Izixhobo zokulwa kweemfazwe zaza kuhluthwa.
Umlambo waseJamani unqunywe kwiinqanawa ezingama-36 kwaye akukho namanqanawa.
IJamani yayivinjelwe ukuba ne-Air Force
I-anschluss (umanyano) phakathi kweJamani kunye neAustria yavalwa.
Ukulungiswa kunye nokuzigweba:
Kulo 'mfazwe wecala' isigatya saseJamani kufuneka samkele isigwebo esipheleleyo semfazwe.
IJamani kufuneka ihlawule imali eyi-6 600 yezigidi.
I League of Nations:
I-League of Nations yayiza kudala ukukhusela ingxabano ehlabathini.
IJamani yalahlekelwa yi-13% yomhlaba wayo, i-12% yabantu bayo, i-48% yemithombo yayo yensimbi, i-15% yayo imveliso yezolimo kunye ne-10% yayo yamalahle. Mhlawumbi ngokucacileyo, imbono yoluntu yaseJamani yakhawuleza yakhupha kule 'Diktat' (yalela uxolo), ngoxa amaJamani ayayityinayo ayebizwa ngokuba yi-'Criminal Criminals '. IBrithani neFransi baziva ukuba umnqophiso wawungelungileyo - ngokwenene babefuna imimiselo engqongqo eyenziwe kumaJamani - kodwa iUnited States inqwenela ukuyivuma ngenxa yokuba ayifuni ukuba yinxalenye yeZizwe zeZizwe.
Imephu yaseYurophu yahlulwa nemiphumo, ngokukodwa kwi-Balkans, ihlala kwixesha lanamhlanje.
Amazwe amaninzi ashiywe ngamaqela amancinci amakhulu: kwakukho izigidi zabantu ezintathu zaseGermany eCzechoslovakia kuphela.
I-League of Nations yayibuthakathaka ngaphandle kokuba iUnited States kunye nomkhosi wayo ukunyanzelisa izigqibo.
AmaJamani amaninzi abaphatha kakubi. Emva koko, babesanduline i-armistice, kungekhona ukuzinikezela, kunye neentlangano ezingazange zihlale eJamani.
Ngamanye amaxesha iimbali-mlando ziphetha ngokuthi umnqophiso wawungcono kakhulu kunokuba wawulindelwe, kwaye akunakulungile. Bathetha ukuba, ngelixa umnqophiso ungavumeli enye imfazwe, le nto yayingenxa yemigca ephezulu yaseYurophu apho iWW1 yahluleka ukuyicombulula, kwaye bayathetha ukuba umnqophiso wawuya kusebenza xa iintlanga ezihlanganyeneyo zinyanzelisa, endaweni yokuwa kwaye idlalwe. Oku kusasazo imbono. Awunakufumana ukuba ungosazi-mlando wanamhlanje uvuma ukuba iSivumelwano siBangele iMfazwe yeBini yeMfazwe , nangona ngokucacileyo siphumelele kwinjongo yaso ukukhusela enye imfazwe enkulu. Yintoni eqinisekileyo kukuba uHitler wakwazi ukusebenzisa iSivumelwano ngokugqithiseleyo ukuba axhaswe emva kwakhe: ebhenxisa kumajoni ayeziva ekhonjiswe, ekhusela umsindo kwiiNgcali zoNovemba ukuba adle ezinye iintlalo-ntlalo, athembise ukunqoba iVersailles aze enze umkhondo ukwenza njalo .. .
Nangona kunjalo, abaxhasayo baseVersailles bathanda ukujonga isivumelwano soxolo eJamani esibekwa eRussia yaseSoviet, esithatha indawo enkulu yomhlaba, ubuninzi kunye nobutyebi, kwaye ibonisa ukuba babengenanto engathandekiyo ukuyithatha izinto. Ingaba umntu ophosakeleyo ulungisa omnye, ngokuqinisekileyo, ukuya kumfundi.
Ixesha elifutshane kunye neMbali ye-Illuminati
Iqonga le-Gunpowder: Ukhohlakele kwi-17th Century England
Ngaphandle kwe-Empire-German Colonial History kunye neMemorials
Iimidlalo eziPhambili eziPhambili zeMfazwe ze-PC yakho
Imbali ye-Eiffel Tower
I-Taxonomy yeBloom kwiKlasi
Ngaba Ndiyayigqiba kakhulu Ukukhahlela?
Iingcaphuno zokupasa i-Boss yakho kwi-Boss Day Awaxabiso
Imfazwe yaseVietnam: I-Tet Offensive
Indlela yokuQala iNkundla yePaintball
Iindlela ezi-4 zokwenza i-Homeschool ukubhala ngokufanelekileyo
I-Olympian uJohnny Gray i-Coaching Tips and Running Tips
Izixhobo zeThafile zeeTesha: I-One Through 12
Amaziko e-Archives ye-Bass yamaKristu
2000 I-US Ivule: I-Tiger Woods iyayichitha
20 Amazwi ngoJames Scott
Iimpawu ezinomdla kunye namanani malunga nabantu base-Ireland baseMerika
Umkhosi weNtshonalanga wamaTshayina
Zolimo kunye no qoqosho
Ngaba Ndinokuzinikezela Kukho Unkulunkulu Omnye?
I-Stanza: INgqungquthela Ngaphakathi Kwembongo
Abaprofeti Bathetheli bakaBawo baseZulwini emhlabeni